I-Apple iPad Pro: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | Iindaba zeGajethi
Ezi zintsha IPad Pro 2018
U-Eder Esteban | | iapile, amacwecwe
U-Apple ubambe umsitho omtsha eNew York namhlanje, nge-30 ka-Okthobha, apho babonise khona uthotho lwezinto ezintsha. Enye yeemveliso eziye zenziwa kuyo, kwaye kulindelwe kakhulu ngabasebenzisi, zintsha IPad Pro 2018. Njengoko sele kuphawuliwe kwezi veki zidlulileyo, sijamelene notshintsho oluphawulekayo kwinkampani yeCupertino.
Uyilo olutsha lwaziswa nge-IP Pro 2018, ukongeza kokubandakanywa kuthotho lwezinto eziphuculweyo, kuwo onke amanqanaba. Ke sifumana eyona modeli igqwesileyo iApple ayibonisileyo ukuza kuthi ga ngoku. Ukulungele ukufumana okungakumbi malunga nayo?
Uyilo olutsha, oluvelisa amagqabantshintshi aqinisekileyo kunye namandla amakhulu zizinto ezimbini ezichaza esona sizukulwana sitsha. Isizukulwana sotshintsho, njengoko inkampani ngokwayo isitsho. Kwaye kunjalo Olu lolona tshintsho lukhulu okoko kwaziswa imodeli yokuqala kwiminyaka emithathu edlulileyo.
1 Uyilo olutsha
2 Inkqubo kunye nokugcinwa
3 Ipensile ye-Apple kunye neFolio yekhibhodi ye-Smart
4 Ixabiso kunye nokufumaneka
4.1 IPad Pro enesikrini esizi-intshi ezili-11
4.2 IPad Pro enesikrini se-intshi eyi-12,9
Eyona nto intsha siyifumana kwezi iPad Pro 2018 kukungabikho kweqhosha lasekhaya kuzo. Isigqibo esilandela i-Apple enye eyenziwe ngeemodeli zayo ze-iPhone, ke ayisiyonto ingaqhelekanga. Ukungabikho kweli qhosha kuvumela iifreyimu ezincinci, eziguqulela kwiscreen esikhudlwana. Ngaphandle kwamathandabuzo inegalelo ekwenzeni ukhetho olufanelekileyo xa kuziwa ekubukeni uthotho okanye iimuvi kuzo.
Kwaziswa ubungakanani obubini kwesi sizukulwana sitsha. Kukho imodeli ye-intshi eyi-11 kunye nobukhulu be-intshi eyi-12,9. Ukuze abasebenzisi babe nakho ukukhetha ubungakanani abacinga ukuba bulunge ngakumbi kwimeko yabo. Umahluko kuphela phakathi kwezi zimbini ubukhulu, kwinqanaba lokubalula ziyafana.
I-iPad Pro ibonile ukuba izakhelo zabo zincitshisiwe, ngakumbi kwizakhelo eziphezulu nezisezantsi oku kuyabonakala. Kodwa zizakhelo ezingqindilili ngokwaneleyo ubenakho ukuba nenzwa yesazisi sobuso kubo, Enye yeenkwenkwezi ezisebenza kwesi sizukulwana sitsha. Into enokwenzeka ngaphandle kwesidingo senotshi, ukukhulula uninzi. Unokubona kwakhona ukuba iimbombo zijikelezwe, ngoko ke ukuma kwe-90 degree kuyehla.
U-Apple uyaqhubeka nokuqinisekisa ukuba abasebenzisi baya kuba nakho ukusebenzisa i-ID yobuso kwi-Pro Pro ngokuthe nkqo okanye ngokuthe nkqo. Nangona kuqwalaselo lokuqala kuya kufuneka siyibambe kwimowudi yokuma. Nje ukuba sikwenze oku, singayisebenzisa ngazo zombini iindlela. Yintoni eya kusinika ezinye iindlela zokusebenzisa.
Sijongene nescreen se-retina screen kule Pro Pro. I-Apple ayikenzi ukutsiba kwi-OLED ngesi sizukulwana, kodwa sifumana eyona ilungileyo ngaphakathi kweLCD kwesi sikrini. Isebenzisa itekhnoloji ye-iPhone XR kwisiboniso, esibonisa i-retina engamanzi esichaze ngaphambili. Ukongeza, sineProMotion, umbala obanzi we-gamut kunye neetekhnoloji ye-TrueTone ekhoyo kuyo.
Inkqubo kunye nokugcinwa
Uyilo olutsha kunye neprosesa entsha. Kuba iApple yazisa i-A12X Bionic kuzo, eluhlobo lweprosesa eboniswe kwinyanga ephelileyo kunye nesizukulwana sayo esitsha se-iPhone. Yiprosesa eza kuzisa uphuculo olwahlukeneyo, hayi ekusebenzeni nasekusebenzeni kwamandla kuphela. Kukwakho nokuphuculwa kwemizobo.
Isekwe kwinkqubo ye-iPhone 7nm. I-CPU yayo inee-cores ezisibhozo, ngelixa i-GPU, eyilwe yi-Apple uqobo, ine-cores ezi-7. Kuyo sifumana i-10.000 yezigidi zeetransistors. Injini ye-neural nayo ibalulekile, kuba inkampani yaseCupertino yazise le siyibonileyo kwi-iPhone kulo nyaka.
Yinjini yeNeural eya kuvumela imisebenzi ye-5 trillion ukuba yenziwe, ifumaneke ngokuFunda ngomatshini. Enye into ephuculweyo kwezi zixhobo zePad Pro zivela kwinkampani yaseMelika. Ngokumalunga nokugcinwa, ngoku siza kufumana ukuya kuthi ga kwi-1TB yokugcina ngokukhawuleza okukhulu.
Akuthandabuzeki Olunye lolona tshintsho lubalulekileyo kukwaziswa kohlobo C lwe-USB kule Pro Pro. Kwakukho amarhe kwezi veki zokuba iApple izakuyazisa kwesi sizukulwana sitsha, yiyo loo nto ibe yeyokuqala. Kwaye sele yenzekile. Ke inkampani ngoku ibeka uMbane ecaleni. Ukongeza, i-iPhone inokuhlawuliswa kusetyenziswa i-USB-C ukuya kwi-Lightning cable kwaye iqhagamshele kwiscreen esingaphandle ukuya kuthi ga kwi-5K.
Ipensile ye-Apple kunye neFolio yekhibhodi ye-Smart
Ayisiyiyo ipro Pro kuphela ehlaziyiweyo, kunye nezixhobo zayo ziyenzile. Njengakwisixhobo esiphambili, sifumana utshintsho kokubini kuyilo nakwinqanaba lemisebenzi kule Ipensile yeApple kunye neKhibhodi ye-Smart. Zizizixhobo ezibini ebezihamba nolu sapho lwezixhobo ixesha elide, ke ukuhlaziywa kwazo kubalulekile.
Okokuqala sifumana i-Smart Keyboard Folio. U-Apple wenze isigqibo sokufaka kwakhona ikhibhodi kwi-iPad Pro usebenzisa iSinxibelelanisi seSmart, enkosi apho ikhibhodi inokusetyenziswa ngaphandle kokusebenzisa iBluetooth okanye ibhetri edityanisiweyo. Le yinto eza kusenza silibale ngomthwalo wakho.
Njengoko sikuxelele, kwabakho utshintsho kuyilo lwayo. Kule meko, I-Apple yazisa ngobeko lwebhodi yezitshixo. Ukongeza, sifumana indawo ezimbini zokuthambeka kwescreen. Ngale ndlela, siya kuba nakho ukuyisebenzisa edesikeni okanye etafileni, kodwa ngesinye isikhundla inokusetyenziswa ethangeni, ukuba siyisebenzisa sihleli esofeni okanye ebhedini.
Isincedisi sesibini sale Pro Pro yiPensile yeApple. Inkampani yaseCupertino yenze uhlengahlengiso olufanayo, ukwazisa umazibuthe kuyo, ukuze ibe nakho ukubambelela kwithebhulethi, njengoko ubona kwifoto. Xa sisenza oku, ipensile ibiza ngaphandle kwentambo. Ke kulula kakhulu ukulayisha ngoku. Imodeli entsha ikwanendawo entsha ephathekayo, esiya kuthi sikwazi ukuyisebenzisa ukwenza izinto eziziisekondari.
Njengesiqhelo, ezi Pro Pro zikhutshwa kwiinguqulelo ezahlukeneyo, ezahlukileyo ngokuxhomekeka kugcino lwangaphakathi, kunye nokuba ufuna ingxelo eneWiFi okanye enye eneWiFi LTE. Ngokusekwe koku, sifumana uluhlu lwamaxabiso olubanzi. Sikubonisa amaxabiso eziza kubakho zonke iinguqulelo zesizukulwana esitsha eSpain, kubukhulu bazo obubini:
IPad Pro enesikrini esizi-intshi ezili-11
I-Wi-Fi engama-64 GB: i-euro ezingama-879
I-64 GB ene-WiFi-LTE: 1.049 i-euro
I-Wi-Fi engama-256 GB: i-euro ezingama-1.049
I-256 GB ene-WiFi-LTE: 1.219 i-euro
I-Wi-Fi engama-512 GB: i-euro ezingama-1.269
I-512 GB ene-WiFi- LTE: 1.439 i-euro
I-1 TB iWi-Fi: i-1.709 i-euro
I-1 TB ene-WiFi- LTE: i-1.879 i-euro
IPad Pro enesikrini se-intshi eyi-12,9
I-Wi-Fi engama-64 GB: i-euro ezingama-1099
I-64 GB ene-WiFi-LTE: 1.269 i-euro
I-Wi-Fi engama-256 GB: i-euro ezingama-1.269
I-256 GB ene-WiFi-LTE: 1.439 i-euro
I-Wi-Fi engama-512 GB: i-euro ezingama-1.489
I-512 GB ene-WiFi- LTE: 1.659 i-euro
I-1 TB iWi-Fi: i-1.929 i-euro
I-1 TB ene-WiFi- LTE: i-2.099 i-euro
U-Apple ukwatyhile ixabiso lezincedisi. Ixabiso lebhodibhodi eyi-199 euros yemodeli ye-intshi ye-11 kunye nee-euro ezingama-219 kubungakanani be-12,9-intshi. Ixabiso lePensile entsha ye-Apple ngama-135 euros.
Zonke iinguqulelo ze-iPad Pro ngoku zinokugcinwa ngokusemthethweni kwiwebhusayithi ye-Apple. Ukuphehlelelwa kwezi modeli zimbini kuya kwenzeka nge-7 kaNovemba kwihlabathi liphela, kubandakanya neSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » iapile » Ezi zintsha IPad Pro 2018
Injalo iMacBook Air entsha kunye neMac Mini 2018
I-eSIM: Yonke into ekufuneka uyazi ngayo